Arrimo Muhiim Ah Gabadha Uurka Leh Inay Samayso - Daryeel Magazine
Arrimo Muhiim Ah Gabadha Uurka Leh Inay Samayso
Hooyo walba waxay rabtaa inay samayso wax kasta si ilmeheedu u noqdo mid caafimaad iyo nabad qaba. Waxaan ognahay marxalada ugu muhiimsan ilmaha ee wax la siiyo waa markuu caloosha ku jiro, waxaana muhiim ah in aad talaabooyinka cafimaadka ka biloowdid maalinta ugu horeeysa ee aad ogaatid inaad uur leedahay.
Cun cunto faa’ido iyo nafaqo leh: Waxaad cuntid oo aad cabtid ayey raad ku leedahay ilmaha koritaankiisa iyo cafimaadkiisa,
jirkaaga iyo ilmaha jirkiisa waxay ubahanyihiin fitamiino iyo nafaqo, sababtoo ah waxaa abuurmaya ilmaha maskaxdiisa, aragtidiisa, lafihiisa, xubnihiisa, kuwaas oo ubaahan nafaqo si uu ilmaha udhaso isagoo cafimaad qaba udhasho, waxaa dhici karta inaad dhahdid ilmaha ilaahay ayaa abuuraya oo wuxuu noqdo raali ayaan ku ahay, waxaas oo dhan ma ubaahni inaan sameeyo waa sax waxaad tiri laakiin ilaahay wuxuu ku yiri sababta la imoow si aad ku heshid ilmo caafimaad qaba uheshid, adoonka asbaabta waa in la imaada kadib ilaahay ka sugaa markuu dadaalo.
Talada guud ee cuntada ku saabsan: Rajiim ( is dhuubid ) iska ilaali inta aad uurka leedahay, sababtoo ah ilmahu dhakhso ayey ukoraan mudo yar gudeheed, 3 wiig gudahood ilmaha waxaa usamaysma 250.000 unugyada maskaxda daqiiqad kasta, markaa hadaad is caatayn gasho dhib ayaad ukeenaysaa ilmaha, maceheeduna maaha cunto badan inaad cuntid, inta aad uurka leedahay waa inaad cuntaa qiyaastii 300 kalorier maalintii.
Cunto caafimaad leh cun, badso khudaarta, iyo furudka, waxaa lagaa rabaa maalintii inaad cuntid 3 furuud iyo 3 khudaar ah, subaga iska yaree, soo qaado buug kuu sheegaya khudaarta iyo furudyada faa’idooyikooda si aad isoogu badbadashid kuwaad cunaysid, oo say ukala muhiimsanyihiin aad u qaadatid, waxaa ugu muhiimsan waa timirta, caanaha, mooska, tufaaxa, salatka, khudaarta cagaaran oo dhan, digirta, galeeyda, bariiska. Maalinkasta samayso cunto ay khudaari ka buuxdo, cunto walba dhexdoodana cun furuud, habeenkiina boorash ama galeey ama digir cun.
Waxaad cabtaa ugu yaraan labo litir oo biyo ah, aad iyo aad iyo aad ayey muhiim uyihiin biyuhu, dumar badan kuma baraarugsana faa’idadooda. Jirkaaga iyo ilamaha jirkoodu biyo ayey ubaahanyihiin,
Waa inaad joojisaa kaffeega hadaad cabto, shaahana yaraysaa. Baaritaan la sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in kaffeegu dhibaatooyin uleeyahay ilmaha.
Waa muhiim inaad cabtid maalintii qiyaastii haaf litir caano ah, si aadan u iloobin waxaad samayn kartaa sida biyaha oo kale, inaad dhigatid caanaha meesha aad joogtid, ama subaxdii koob cab, galabtiina koob, habeenkiina koob.
Kaluunka: dadka caadiga ayuu caafimaad u yahay, dumarka uurka leh khatar ayuu uyahay.
Beerka: sababtoo ah wuxuu leeyahay A-vitamin aad ubadan oo ilamaha dhib ukeeni kara.
Sifiican iskaga dhaq khudaarta iyo furuudka, sababtoo ah bakteeriya yar oo aad cuntid dhib ayey
ukeeni kartaa ilmaha.
Daawo ha qaadan ilaa aad kala hadashid dhatarka ama uu kuu ogolaado mooyaane, sababtoo ah daawooyinka qaar looguma talagalin dumarka uurka leh, qaarkoodna dhibaatooyin badan ayey uleeyihin ilmaha, waxaana dhici karta inuu soo rido ilamaha.
Waxaana dhacda in dumarku kala duwanyihiin daawada say ukala xamili karaan oo mid hadii loo ogolaado in ta kale loo diido. Sidaas darteed ha liqin kiniin ama ha cabin daawo ilaa uu kuu ogalaado dakhtarku.
Malabka Iyo Uurka 8 Arrimood Oo Ay Tahay Hooyada Uurka Leh Inay Ka Taxadarto Maxaa keena Dhiiga Ka Yimaada Gabadha Uurka Leh? Arrimo Gabadha la Gudboon ka Hor Go’aanka Guurka